Xiaomi Mi 11 International dị ugbu a na Snapdragon 888 na 6,81 "WQHD + AMOLED panel | Androidsis
Xiaomi Mi 11 International bụ onye ọrụ gọọmentị na Snapdragon 888 na 6,81 ″ WQHD + AMOLED panel
Xiaomi ka gosiputara ihe ọhụrụ Xiaomi Mi 11 International, ekwentị nke ụfọdụ obere nkọwa mara n'oge ahụ, onye isi na-ada na sensọ azụ. Isi bụ 108 megapixels, nke abụọ bụ 13 megapixel super wide-angle unit, na nke atọ bụ 5 megapixel nnukwu. Nke a na-esonyere otu a na-akpọ nnukwu, ma n'ihu ya na-etinye oghere MP nke 20 MP perforated selfie.
Ọ na-apụta maka ịnwe ngụkọta nke ọrụ asatọ dị mgbe ịdekọ na ndị bụ ihe ndị a: Ime Anwansi Ime Anwansi, Freeba Ọkpụkpụ, Worldwa yiri nke a, Oge Ifriizi, Oge Abalị na Slow Shutter. Otu n'ime ha ọbụlagodi n'ọchịchịrị zuru oke ga-ekwe ka ndekọ vidiyo dị ka a ga-asị na ìhè dị. Ndekọ kachasị ruru 8K, iwe maka oge ndị a. Ndekọ 4K ga-ekwe omume na 60 FPS.
Ihuenyo nke Xiaomi Mi 11 International bụ AMOLED nke 6,81 ″ na mkpebi WQHD +, ọnụego ume ọhụrụ bụ 120 Hz na ihe ntanye na-emetụ n'ahụ ruru 480 Hz. Nhazi ahụ niile gbagọrọ agbagọ, oke nkenke nke ngwaọrụ ahụ na-adọrọ adọrọ, ịbụ otu n'ime ndị kachasị njọ na ahịa. Nchedo sitere n'aka Gorilla Glass Victus.
1 Nhazi, RAM, nchekwa na batrị
2 Usoro njikwa
3 Njikọta na ọtụtụ ndị ọzọ
Mgbawa nke Xiaomi Mi 11 International bụ onye nhazi ahụ Snapdragon 888 nke ụlọ ọrụ gosipụtara na izu ole na ole gara aga, na-adabere na Adreno 660 GPU nke arụmọrụ ya dị oke egwu na egwuregwu. Site na ntinye nke CPU a, ọ bụ otu n'ime ngwaọrụ ndị dị elu na ahịa n'okpuru ọnụahịa nke ọdụ ndị ọzọ.
The Xiaomi ama ga-abịa na otu RAM ebe nchekwa nhọrọ, ọ ga-enwe 8 GB na ọ ga-anọgide na-hụrụ ma ọ bụrụ na e nwere otu nhọrọ na ukwuu ego mgbe e mesịrị. Na nchekwa onye ọrụ nwere ike ịhọrọ n'etiti 128 na 256 GB, mgbanwe dị gburugburu 50 euro.
Ekwenyesiri ike na A ga-ebo Xiaomi Mi 11 International ebubo site na chaja 55W, na-ebugharị ngwaọrụ site na 0 ruo 100% n'ihe dị ka nkeji 45. Batrị ahụ bụ 4.600 mAh, zuru oke iji ya kwa ụbọchị ma kwe nkwa arụmọrụ dị mma na nhazi nke ngwaọrụ ahụ ji bịa. O nwere ugwo ikuku nke 50W na 10W ma oburu na obu uzo ozo. Chaja nwere ike ọbụna ịnye laptọọpụ.
Xiaomi ka gosipụtara na Xiaomi Mi 11 ga-abịa na MIUI 12.5 na gam akporo 11, na mmekorita ya mmegharị ahụ ga-enweta nnukwu ibu na mmelite a. Na mgbakwunye, ndị ọrụ ga-enwe ike ikpebi ma iwepụ ngwa na-abịa na ndabara na ekwentị Mi 11.
Na MIUI 12.5 na-abịa ọtụtụ mgbanweA na - ahụta mmelite ahụ na interface dị ọcha karị, na-ebugharị ngwa ngwa na ihe niile sistemu nke sistemụ kachasị na gam akporo 11. Ndị ọrụ ga-ekpebi ngwa ndị ha nwere na ngwaọrụ ha, ọkachasị ndị nrụpụta.
Nzuzo ga-abụ otu n’ime isi MIUI 12.5 pụtara, ga-enwe njikwa dị ukwuu nke ikikere enyere, Virtual ID na nlekota oru nyocha ngwa. Emebere nzuzo na nzuzo, na-aga n'ihu, a rụọ ọrụ a kemgbe ọtụtụ ọnwa tupu ị gosi ya na ọha mmadụ.
Njikọta na ọtụtụ ndị ọzọ
El Xiaomi Mi 11 International Ọ ga-abata na otu akụkụ njikọta zuru oke, site na ịbịa na modem 5G X60 ọ nwere njikọta nnukwu ọgbọ. Na mgbakwunye na 5G ahụ e kwuru na mbụ, ọ na-abịa na Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, USB-C iji kwụọ ekwentị ahụ, infrared, GPS, NFC na Dual SIM.
Unkpọghe ihuenyo ga-eme site na akara mkpisiaka agụ n'okpuru ihuenyo, enwere ike ekenye ya ozugbo ịmalitere ekwentị ma ọ bụ ọ bụrụ na ịchọrọ ya ma emechaa. Comesda si n'aka Harman Kardon na ndị ọkà okwu dị abụọ, kwesịrị ekwesị maka igosipụta ọdịyo dị elu.
IKIRU 6.81 "AMOLED nwere mkpebi WQHD + (3.200 x 1.440 pikselụ) / 120 Hz nwetaghachi ume / 480 Hz gosipụtara ngosi / Gorilla Glass Victus / 1.500 nits / 515 ppi
Nhazi Qualcomm Snapdragon 888
Kaadị grafik Adreno 660
Gbanwee CAMERA 108 MP Isi ihe mmetụta / 13 Megapixel Super Wide Sensor / 5 MP Macro Sensor / HDR10 +
N'ihu CAMERA Ihe mmetụta 20 MP
UMUAKA 4.600 mAh na 55W ngwa ngwa / 50W wireless ụgwọ / 10W agbara ụgwọ / Gallium nitride chaja
Njikọ 5G / Bluetooth 5.2 / Wi-Fi 6 / Infrared / GPS / NFC / USB-C / Dual SIM
NDỊ ọzọ Ndi okwu abuo / on-Screen Fingerprint Reader / Harman Kardon Sound
Mbibi na ibu ibu 164.3 x 74.6 x 8.1 mm / 196 gram
El Xiaomi Mi 11 Ọnụahịa mba ụwa Ọ ga-adịgasị iche dabere na nchekwa ahọpụtara, 8/128 GB ga-efu euro 749, ma ọ bụrụ na ị kpebie na 8/256 GB ọ na-aga 799 euro. Ọ ga-adị na agba ndị a: ọcha, nwa, acha anụnụ anụnụ, isi awọ na oroma. Oghere ga-abata na njedebe nke ọnwa nke February.
El Xiaomi Mi 11 nwere ike gbaa akwụkwọ na Mi.com site n'oge a gaa n'ihu, ọ ga-ekwe omume ịme ya na ebe ndị ọzọ dịka Fnac, MediaMarkt, Houselọ ekwentị, PC Component, Carrefour, El Corte Inglés, Yoigo, Movistar, Orange na Vodafone. Ọ na-abịa na akwụkwọ ikike afọ 2 na ịrụzi ihuenyo akwụghị ụgwọ.
Ihe dị mkpa dị mkpa bụ na ekwentị rutere na mkpuchi antibacterial, ụlọ ọrụ ahụ chọrọ imesi ike na ọ dị mkpa na ekwentị ọ bụla na-eburu ya ma ọ bụrụ nchebe. Na nke a, ngwaọrụ ahụ na-etinye oyi akwa Gorilla Glass Victus maka nchekwa kachasị na nsị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Xiaomi Mi 11 International bụ onye ọrụ gọọmentị na Snapdragon 888 na 6,81 ″ WQHD + AMOLED panel
Otu esi ewepu ozi iji nabata kuki (Valid for Android, Windows, Linux na MAC)